Clément Shala inodzivirira yemagetsi brazier yevakadzi veCongo - Afrikhepri Fondation
China, june 24, 2021
Clément Shala anopinza iyo brazier yemagetsi yevakadzi veCongo
Verenga: 1 min
CElement Shala, wekuCongo anobva kuDemocratic Republic of Congo (DRC) akagadzira electro-brazier iyo yaakagadzira kubva kunzvimbo dzakasunungurwa. Injini inogadzirwa kubva muzvikamu zvakaunganidzwa kubva kukaseti uye maCD redhiyo. Iyi injini inoshandisa fan inovhenekesa kupisa kwemazimbe, iyo pachayo inoumbwa nemarara emarasha asingashandiswe nemunhu. Iyo mota inofambiswa ne2 yakashandiswa mabhatiri emagetsi.
Kusvikira ikozvino, vazhinji vekuCongo vanobika nemashavha, mafuta anodhura akawanda evanhu vakawanda veCongo uye kunyanya kusagadzikana. Sezvo munyori we brazier anoti, zvaakagadzirwa zvinoita kuti zvikwanise kugadzirisa kudonha kwemiti kwegore.
Kwemusi iwoyo, hapana rubatsiro kubva kuCongo nyika yakasvika kuzokurudzira muvambi uyu uye kugadzirwa kwemabhizimusi hakusi kwemazuva asi kunze kwekunge vaAfrica uye kunyanya avo vanoenda kune dzimwe nyika vanoisa maoko avo muhomwe dzavo kuti vabatsire mwana akashinga kubva kuKemet (Africa). Mamwe mapepa e-brazier atenge atengeswa pasina chero chiziviso pamutengo we 15 € 9839,35 Fcfa, mwedzi wemashavha kune wevoruzhinji weCongo.
China, AU yekutanga chirongwa cheparaonic chekubatanidza misoro yeAfrica
Documentary pamusoro pehupenyu hwa Bob Marley
Mukuvapo kwechakavanzika chakadzika - Eckhart Tollé (Audio)